Isimo sezulu saseSpain: izici, izinhlobo namazinga okushisa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
El Isimo sezulu saseSpain yaziwa njenge-colloquially njengesimo sezulu saseMedithera. Kuyisimo sezulu esidume kakhulu ngenxa yezici ezifana nokukhanya kwelanga amahora amaningi, ubusika obuncane kanye nehlobo elinemvula encane. Nokho, akusona ukuphela kwesimo sezulu eSpain.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi ngesimo sezulu saseSpain nezici zayo.
2 Isimo sezulu saseSpain: izinhlobo
2.1 Isimo sezulu saseMedithera
2.2 Isimo sezulu sase-Oceanic
2.3 Isimo sezulu esishisayo
2.4 Isimo sezulu saseSpain: isimo sezulu sezintaba
Phakathi kwezimpawu ezisemqoka esinazo zesimo sezulu saseSpain, ibheka izici zezwe lethu ezenza isimo sezulu singafani ngokuphelele. Singasuka ezindaweni lapho amazinga okushisa acishe abe ngu-15 degrees, kanti kwezinye zidlula ama-degree angama-40 ehlobo. Kungokufanayo nangemvula. Singasuka ezindaweni lapho kunemvula emaphakathi ngonyaka enenani elingaphezulu kwama-2500 mm, kanti kwezinye kunesimo sezulu sasehlane saseMedithera lapho singeqi ku-200 mm ngonyaka.
Yize sinezindawo ezahlukahlukene ezinezici ezahlukahlukene, singathola ezinye izici ezijwayelekile kwisimo sezulu saseSpain. Ake sibone ukuthi yiziphi lezi zimfanelo:
Amandla okushisa akhona enyangeni efudumele futhi ebanda kakhulu makhulu kakhulu enkabeni yethafa elisenkabeni kunezindawo ezinjengeziQhingi zeCanary. Ngenkathi singaphakathi kwethafa eliphakathi nendawo singathola ama-thermal amplitudes ama-degree angama-20, eziqhingini sithola ukwehluka kwamadigri ama-5 kuphela.
Amanani wamazinga okushisa ehla ukusuka entshonalanga kuya empumalanga maphakathi nenhlonhlo.
Ingxenye esenyakatho yethafa elisenkabeni inamazinga okushisa aphansi ngokwesilinganiso kunasengxenyeni eseningizimu.
Inyanga enamazinga okushisa aphansi kunayo yonke inhlonhlo kuvame ukuba ngoJanuwari. Ngokolunye uhlangothi, inyanga enamazinga okushisa aphakeme kakhulu ngu-Agasti.
Ngokuqondene nokushisa kwamanzi, eMedithera sinesilinganiso esingu-15-18 ngenkathi oLwandle lwaseCantabrian luphansi ngandlela thile.
Isimo sezulu saseSpain: izinhlobo
Sizobona ukuthi iziphi izimo zezulu eziyinhloko zaseSpain ezikhona: ikakhulukazi sineMedithera, ulwandle, izindawo ezishisayo nezintaba.
Isimo sezulu saseMedithera
Lolu uhlobo lwesimo sezulu esivelele eSpain ngoba ludlulela kulo lonke ugu lwaseMedithera, ingaphakathi lenhlonhlo kanye ne-Balearic Islands. Kodwa-ke, kunomehluko omkhulu phakathi kwezinye izifunda nezinye, okwenza kube neziqeshana ezintathu: iMedithera ejwayelekile, iMedithera yezwekazi neMedithera eyomile.
Kepha ngaphambi kokukhuluma ngalezi zingxenye, ake siqale sibheke izici ezijwayelekile zesimo sezulu saseMedithera: Isimo sezulu saseMedithera siyinhlayiyana yesimo sezulu esipholile. Kubonakala ebusika obumnene nobunezimvula, ehlobo elomile nelishisayo noma elincane, namazinga okushisa ahlukahlukene nemvula ekwindla nasentwasahlobo.
Manje sizohlaziya uhlobo ngalunye lwesimo sezulu saseMedithera ezweni lethu:
I-Mediterranean ejwayelekile: Lesi yisimo sezulu saseMedithera kanjalo. Ihlanganisa ingxenye enkulu yogu lwegama elifanayo, ezinye izindawo eziphakathi nezwe, iCeuta, iMelilla neBalearic Islands. Ihlobo liyashisa futhi lomile, izinga lokushisa elijwayelekile lingaphezu kuka-22 ° C. ESpain, leli phethini lihlukile, ngoba ugu luvikelwe ithafa laseCastilian futhi lubheke empumalanga. Ngakho-ke, ekwindla nasentwasahlobo bathola imvula eningi kunasebusika.
Izwekazi iMedithera: Njengoba igama liphakamisa, linezici ezithile zesimo sezulu sezwekazi. Yindawo enesimo sezulu esivamile saseMedithera kepha kude nolwandle, njengethafa eliphakathi nendawo laseSpain, ukucindezeleka kwe-Ebro, ingaphakathi leCatalonia nengxenye esenyakatho-mpumalanga yeAndalusia. Ubusika bude futhi buyabanda, ihlobo lifushane futhi liyashisa, futhi umehluko wezinga lokushisa phakathi kwemini nobusuku mkhulu. Igcina izimo zezulu zesimo sezulu saseMedithera, kepha inezinga lokushisa elibi kakhulu lesimo sezulu sezwekazi. Ngenxa yebanga ukusuka olwandle, isimo sezulu somile kunokujwayelekile.
I-Mediterranean eyomile: Isimo sezulu esishintshayo phakathi kweMedithera nehlane. Izinga lokushisa liphakeme, ubusika bufudumele, isilinganiso sasehlobo singaphezu kuka-25 ° C, kanti izinga lokushisa eliphakeme endaweni yangaphakathi liphakeme kakhulu, liphakeme ngisho nangaphezu kuka-45 ° C. Izulu liphansi, ligxilwe ekwindla nasentwasahlobo. Lesi simo sezulu sihlukile kwesimo sezulu esomile esishisayo kanye nesimo sezulu esifudumele esomile. ESpain, ungummeleli ojwayelekile waseMurcia, e-Alicante nase-Almería.
Isimo sezulu sase-Oceanic
Isimo sezulu sasolwandle noma se-Atlantic sibonakala ngezimvula eziningi, ezisatshalaliswa njalo unyaka wonke. ESpain, lesi simo sezulu sinabela enyakatho nasenyakatho-ntshonalanga, ukusuka ePyrenees kuya eGalicia. Izulu lonyaka livame ukudlula i-1000 mm, ngakho-ke indawo eluhlaza kakhulu. Izinga lokushisa ebusika licishe libe ngu-12 ° C-15 ° C, kuthi ehlobo lizungeze u-20 ° C-25 ° C. Isibonelo sedolobha elinalesi simo sezulu yiSan Sebastián, Vigo, Oviedo, Santander, njll. Ikakhulukazi eningizimu yeGalicia, izici zomswakama zamadolobha asogwini zandisa izinga lokushisa eliphansi neliphezulu.
Isimo sezulu esishisayo sitholakala ezindaweni ezifudumele eziseduze nezindawo ezishisayo zomhlaba, futhi senzeka kuphela eCanary Islands eSpain.
Ngenxa yokusondela kwayo eTropic of Cancer nasogwini olomile lwase-Afrika, iCanary Islands inesimo sezulu esikhetheke ngokuphelele. I- Izinga lokushisa lifudumele unyaka wonke, isilinganiso esiphakathi kuka-22 ° C no-28 ° C. Imvula igxila ebusika, kodwa iyahluka kusuka esifundeni esinye iye kwesinye futhi ingaba phezulu noma iphansi. Ngakho-ke, esimweni sezulu esishisayo seCanary Islands kungahlukaniswa amanye ama-subclimates.
Isimo sezulu saseSpain: isimo sezulu sezintaba
Isimo sezulu sezintaba sihambisana nohlelo olukhulu lwezintaba: iPyrenees, i-Central System, i-Iberian System, intaba yePenibetic kanye nentaba yaseCantabrian. Kuyabanda kakhulu ebusika futhi kupholile ehlobo.
Kwenzeka ezindaweni ezingaphezu kwamamitha ayi-1000 ngaphezu kogu lolwandle. Izinga lokushisa licishe libe ngu-0 ° C ebusika futhi aliqi ku-20 ° C ehlobo. Imvula inala kakhulu, imvamisa iyisimo seqhwa njengoba ukuphakama kukhuphuka.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngesimo sezulu saseSpain nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Isimo sezulu saseSpain